Barnaamijyada lagu sawirayo pixels | Hal-abuurka khadka tooska ah
Barnaamijyada lagu sawirayo pixels
Marka ciyaaraha fiidiyooga ah ee retro ay noqdeen kuwo moodada ah, iyo sidoo kale consoles-yada, waxaana jiray daadad dad ah oo lagu dhiirigeliyay inay tijaabiyaan ciyaarahaas, marka la barbardhigo kuwa hadda jira, aan isku mid ahayn heerka garaafka, farshaxanka pixels, oo sidoo kale loo yaqaan farshaxanka pixel. Y Barnaamijyo badan oo lagu sawirayo pixels ayaa soo muuqday.
Sababtan awgeed, munaasabaddan, haddii aad rabto inaad la shaqeyso farshaxanka pixel oo aad qaado tillaabooyinkaaga ugu horreeya ee farshaxankan, waxaan soo aruurinay qaar ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee lagu sawirayo pixels. Soo hel dhamaantood, tijaabi oo ka dibna kuwa aad sida ugu jeceshahay hayso.
1 waa maxay farshaxanka pixel
2 Barnaamijyada ugu fiican ee lagu sawiro pixels
2.7 Gallery Sawirrada
waa maxay farshaxanka pixel
Farshaxanka Pixel, oo sidoo kale loo yaqaan farshaxanka pixel, dhab ahaantii waa a farshaxanka dhijitaalka ah kaas oo sawir lagu abuuray iyada oo loo marayo midabaynta pixels shakhsi ahaaneed. Naqshaddan waxaa lagu keydiyay qaab muuqaal GIF ah ama PNG ah, iyadoo xogta aan lumin oo la isku koobay oo la bilaabay in la isticmaalo 1982 (waxaa hore loo yaqaanay 10 sano ka hor) inkastoo markii dambe ay ka baxday moodada oo hadda dib u soo noqotay.
Si aad fikrad ku siiso, farshaxankani wuxuu la mid noqonayaa haddii aad qaadatay xaashida sharoobada oo aad ku rinjiyayso dhawr afar geesood oo keliya oo abuuraya sawir (geed, weji, iwm.).
Barnaamijyada ugu fiican ee lagu sawiro pixels
Haddii aad rabto ku sawir pixels kombiyuutarkaaga, Waxaad ka heli doontaa barnaamijyadan. Waxaa jira noocyo kala duwan oo iyaga ka mid ah, markaa taladayadu waa inaad barato dhammaantood (ugu yaraan kuwa aan halkan ku soo jeedineyno), inaad tijaabiso oo aad go'aansato midka kuugu habboon inaad bilowdo samaynta pixel. fanka
Haddii aad horeba dhowr sano jir u ahayd, waxaa suurtogal ah inaad taqaan Autodesk Animator wakhtigaas. Hadday sidaas tahay, ogow MOAI dhab ahaantii waa a dib u samaynta software-kan 90-kii in kasta oo dabcan ay leedahay kuwa ka wanaagsan oo hadda aad ku kaydsan karto jpg ama png (inkasta oo aad hore u ogeyd in jpg lagu sawirayo pixels aan lagu talinayn).
Tani waa mid ka mid ah barnaamijyada aan ku talineyno kuwa bilowga ah sababtoo ah waxay leedahay a interface aad u fudud, oo waxaan xitaa dhihi karnaa in ay tahay mid dareen leh.
Maxaa soo jiidan doona dareenkaaga ugu badan ee ku saabsan midkaan waa inaadan samayn karin kaliya sawirada pixel, laakiin sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameyso animations (waxaa loo yaqaan "sprite").
Mid kale oo ka mid ah barnaamijyada lagu sawiro pixels ee aad u sahlan in lagu shaqeeyo waa kan. Kani waa 256-midab bitmap interface, laakiin waxaad sawiri kartaa xalal kala duwan. Waxay leedahay astaamo iyo qalabyo badan oo aad aad u jeclaan doonto.
Oo, sida kii hore, waxay sidoo kale leedahay fursadaha animations.
Haa, haa, waxaanu tixraacaynaa Rinjiga nolosha oo dhan, kaliya nooca internetka ee kiiskan iyo sida mid ka mid ah tifaftirayaasha garaafyada ee aan ku ogolayn kaliya inaad sameyso farshaxanka pixel, laakiin aad u badan.
Waxa wanaagsan ayaa ah inaad isticmaali karto lakabyada, saamaynta iyo agabka kale ee tafatiraha sawirka ee naqshadahaaga.
Oo waxaan ka hadleynaa barnaamijyada tafatirka sawirka, ma ogtahay in GIMP aad sidoo kale ku sameyn karto farshaxanka pixel? haa, waxaa jira mid qaabeynta aad samayn karto si aad u isticmaasho si aad u abuurto naqshadaha pixel dhib la'aan.
Haa, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa mar kale hadhow si aad u saxdo sawirada si "caadi ah".
Waxaan hadda aadeynaa barnaamij online ah kaas oo aad awood u yeelan karto samee animations jilayaashaaga. Oo waa in lakabyo kala duwan loo abuuray si ay u sawiraan dabeecadda meelo kala duwan si ay ugu dambeyntii u yeeshaan isku xigxig. Dabcan, is deji sababtoo ah aad bay u fududahay in la isticmaalo oo dareen leh. Waxa laga yaabaa inay qaadato wakhti dheer marka ugu horeysa, laakiin markaa aad bay u dhakhso badan tahay.
Xaaladdan oo kale barnaamijkan Waxay leedahay daabacaad bilaash ah iyo daabacaad lacag bixin ah.. Laakin midka xorta ah waa wax ka badan oo ku filan sababtoo ah waxaad heli doontaa fursado iyo qalab aad u xirfad leh, laga bilaabo lakabyada, daahfurnaanta, kanaalada alfa ...
Nooca lacagta la bixiyay maaha mid aad qaali u ah, waxa uu qabanayona waa in aad abuuri karto GIF-yo noole ah, cursors iyo astaamo, markaa haddii aadan xiisaynaynin waxaad kaydin kartaa lacagtaas.
Barnaamijkan online-ka ah ayaad awood u yeelan kartaa ka shaqee kombayutarka iyo mobilkaaga labadaba (haddii aad caajiso oo aad rabto inaad sameyso naqshad). Kaliya waxaad u baahan tahay browser-ka oo la shaqeyso tafatiraha, taas oo aad u fudud in la isticmaalo. Dhab ahaantii, waxay u yara eg tahay Photoshop marka la eego sida qalabyada loogu dhejiyay guddiga.
Xaaladdan oo kale, barnaamijkan si aad ah diiradda looguma saarin sawirada pixel laakiin in badan oo sprites ah (pixel animations). Laakiin waxay noqon kartaa mid xiiso leh, gaar ahaan haddii aad jeceshahay RPG-yada sababtoo ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto noocyada jilayaasha (laga bilaabo ciyaaraha RPG).
Taasi haa, noqoshada barnaamij duug ah, oo kaliya loogu talagalay Windows, nidaamyada hadda jira waxay sababi kartaa dhibaatooyin ku rakibiddeeda.
Barnaamij kale oo aad u dhamaystiran oo lagu sawirayo pixels waa kan. Waa software kuu ogolaanaya inaad sameyso yaabab haddii aad waqti u hurto oo aad ku wareerto wax badan.
Waa cross-platform in kastoo Nooca la qaadan karo ee Windows uma baahna inaad haysato Adobe AIR (wax, meelo kale, lagaa doonayo).
Haa, Excel ee nolosha oo dhan, xaashida faafinta, ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu sawiro pixels. Sida iska cad, sidan oo kale doon lagu raaco way adag tahay in la milmaan, laakiin runtu waxay tahay in la gaaro.
Dhab ahaantii, waan kaa tagnay a video tutorial si aad u hubiso.
Software kale oo lagu sawiro pixels waa kan. Dabcan, waxay u egtahay tifaftire sawir leh oo leh xulashada qalabyada ku habboon samaynta farshaxanka pixel. Waxay aad ugu egtahay Photoshop oo haddii aad si fiican u taqaanid, aad bay kuugu fududaan doontaa inaad ku shaqeyso.
Waxaan rabnaa inaan kuu dhaafno kan dambe, qalab loogu talagalay kuwa ugu horumarsan ama kuwa doonaya u samee animations ama naqshadaha pixel si xirfad leh.
Dhab ahaantii, Gameloft waa mid ka mid ah istuudiyooyinka isticmaala barnaamijkan, haddii aad rabto inaad naftaada u hurto, waxaa lagugula talinayaa inaad la shaqeyso.
Dabcan, marka hore ma fududa, waxaana laga yaabaa inaad saacado ku qaadato inaad isticmaasho 100%.
Sida aad arki karto, waxaa jira barnaamijyo badan oo lagu sawirayo pixels, iyo kuwo kale oo badan oo aynaan soo sheegin laakiin kuwaas oo noqon kara kuwo xiiso leh. Markaa waxa ugu fiican ayaa ah in aad wax yar u hurto waxaas oo dhan si aad u hesho kuwa aad ugu qanacsan tahay. Miyaad noo haysaa wax kale oo talo ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Barnaamijyada lagu sawirayo pixels
Sida dadka looga saaro Photoshop